Izindaba - Amazinga Wokukhishwa Kwamakhambi AmaShayina
Amazinga Wokukhishwa Kwemifino YamaShayina
Iningi lemikhakha yendabuko yamaShayina ithunyelwa kakhulu kwamanye amazwe. Lokhu kungahle kuhlobene neqiniso lokuthi kusenokwehluka okuningi emibonweni yezikhangiso zemithi yamaShayina ezikhishwe emithini yamaShayina. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukukhishwa kwemithi yamaShayina kuhluke kakhulu kwizicucu zendabuko zemithi yamaShayina. Kungumuthi wendabuko waseShayina, ngoba kunokuphikisana okuningi kwamakhemikhali okucashile ngenkathi kwenziwa umuthi wendabuko wamaShayina. Lo ngumthelela ongenakufinyelelwa lapho kuthakwa umuthi wendabuko wamaShayina. Eqinisweni, ucwaningo lwenkampani yaseGuangdong Yifang ngemishanguzo yendabuko yamaShayina ifakazele ukuthi ukukhishwa kwemithi yamaShayina kungagcina izici eziningi zemithi yamaShayina. Ngasikhathi sinye, ngokuthuthuka kobuchwepheshe, izithako eziphumelelayo zemithi yamaShayina sezicacile. Izinga lemithi yamaShayina e-Chinese Pharmacopoeia Lenzelwe inkomba, kufanele sikwazi ukusungula ngokushesha okukhulu izindinganiso zokuqala zemikhakha yemithi yamaShayina ehlangabezana nezimpawu zemithi yamaShayina futhi yamukelwa ngumhlaba, futhi iqhubeke nokwenza ngcono inqubo yokuqalisa. Lokhu futhi kuhambisana nomthetho wamanje wokuthuthukiswa kwezitshalo zezitshalo.
Ukuqiniswa nokwenziwa ngcono kokukhishwa kwemithi yendabuko yamaShayina kusale emuva. Ngokuqaliswa kanye nokuqhutshekiswa okuqhubekayo kohlelo lwenqubo yokwenziwa ngcono kwezidakamizwa ezweni lami, sekusungulwe uhlelo olujwayelekile lukazwelonke lwezidakamizwa, ijubane lokwakhiwa kolwazi lokulawulwa kwezidakamizwa selusheshisiwe, futhi nomsebenzi wokuphathwa kwezinga elijwayelekile wezidakamizwa usenziwe waba semgangathweni futhi wenziwa ngcono. Kodwa-ke, ukuqiniswa kokukhishwa kwemithi yendabuko yamaShayina kusasele emuva, ikakhulukazi kulezi zici ezilandelayo:
Standard Izinga alisunguliwe. Ukukhishwa kwemithi yamaShayina yizinto zokusetshenziswa ezibalulekile zokukhiqiza imithi yama-patent yamaShayina. Ngokwezibalo, cishe ama-29.8% wemithi yama-patent yamaShayina asebenzisa okukhishwa kwemithi yamaShayina, kepha kusekhona okunye ukukhishwa kwemithi yamaShayina okungakabi namazinga kazwelonke. Ngenxa yokushoda kwamazinga asemthethweni, amazinga okufunwa kanye namazinga ezinkampani amukelwa kakhulu kwimisebenzi yezokukhiqiza neyebhizinisi, futhi izigaba zekhontrakthi zisetshenziswa njengesisekelo sokulethwa komkhiqizo, futhi izindlela zokuhlola ikhwalithi yomkhiqizo zidida kakhulu.
Izinga aliphelele. Izinto ezijwayelekile ezijwayelekile ziyisisekelo sokulawulwa okusebenzayo kwekhwalithi yemikhakha yemithi yamaShayina. Kodwa-ke, ngenxa yokwaziswa isikhathi eside kwamazinga wezinto ezithile ezikhishwe emishinini yamaShayina, izinto ezijwayelekile aziphelele. Isibonelo, eminye imishanguzo emidala yendabuko yamaShayina ekhishwa ayinayo imikhawulo yezinsalela zokubulala izinambuzane nezinto zokunquma kwensimbi esindayo, ezinye azinawo amazinga wokuhlola wezinto ezisizayo, kanti ezinye azinawo amasheke wemikhawulo yamagciwane.
③ Ukungahambi kahle kwamazinga. Kunamazinga amaningi wokukhishwa kwemithi yamaShayina, futhi kukhona okungajwayelekile ekuqambeni amagama, izindlela zokulungiselela, izakhiwo, nasekuhloleni. Isibonelo, okunye ukukhishwa kwemithi yendabuko yamaShayina kunegama elifanayo kepha izindlela ezahlukahlukene zokuzilungiselela. Ukuthatha ukukhishwa kwe-Scutellaria baicalensis Georgi njengesibonelo, kuvela izikhathi eziyi-12 kushicilelo lwango-2010 lwe-Chinese Pharmacopoeia naku- "Prescriptions of Traditional Chinese Medicine". , "Inani lokugcina le-pH ngaphambi kokumiswa", "Isixazululo sokuwasha umkhiqizo ongahluziwe" kanye neminye imingcele yenqubo ebalulekile ethinta ikhwalithi yemikhiqizo eqediwe ihluke kakhulu, okulula ukudala ukudideka ekukhiqizweni nasekusebenziseni.
Izinga elijwayelekile alilingani. Izinga elijwayelekile lokukhishwa kwemithi yendabuko yamaShayina eligunyazwe ngendlela yemithi emisha futhi efakwe kwi-Chinese Pharmacopoeia liphakeme kakhulu. Kodwa-ke, okunye ukukhishwa kwemithi yendabuko yamaShayina kusenezinkinga ezifana nobuchwepheshe obunganele kanye nokushoda kobuchwepheshe obuyisisekelo. Ngaphezu kwalokho, iningi labakhiqizi bemithi yamaShayina lingamabhizinisi amancane anezinga lobuchwepheshe elimpofu ngokwanele namandla okukhiqiza. Akuvamile ukuthi zithuthukise futhi zicwaninge inqubo yokukhiqiza yomkhiqizo ngokungathi sína, nokuntuleka kokuthuthukiswa komkhiqizo okujule, okuholele ekutheni kube nomkhawulo wobuchwepheshe obuphansi bokukhiqiza okhishwe emithini yamaShayina. Umncintiswano wemakethe ophansi futhi ongahlelekile.
⑤ Izinga alisuswa. Ngenxa yokushoda kwezindlela zokuhlola ukwenziwa kwamazinga wokukhishwa kwemishanguzo yamaShayina, eminye imishanguzo yamaShayina ikhipha amazinga "aphile kepha angafi", ukuze amanye amazinga angakavuselelwa noma abuyekezwe iminyaka eminingi asasebenza, futhi kukhona isidingo esiphuthumayo sokusungula indlela ejwayelekile yokuqeda